ငွေကို ဘယ်လိုချွေတာပြီး စုကြမလဲ? - True Money Myanmar
ငွေကို ဘယ်လိုချွေတာပြီး စုကြမလဲ?
ငွေကို ဘယ်လိုချွေတာပြီး စုကြမလဲ။ ဝင်ငွေချင်းအတူတူ ငွေစုတဲ့သူက တပန်းသာပါတယ်။ TrueMoney က ငွေဘယ်လိုစုမလဲဆိုတာအတွက် အကြံဉာဏ်ကောင်းလေးတွေ စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
• နေ့စဉ်အသုံးစရိတ်ကို မှတ်သားပါ။
နေ့စဉ်အသုံးစရိတ်ကို ရေးမှတ်ထားခြင်းက သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံတွေ တနေ့ဘယ်လောက်များများကုန်သွားလဲဆိုတာ မြင်သာထင်သာစေပြီး ချွေတာဖို့တွန်းအားပေးနိုင်ပါတယ်။
တစ်နေ့ ဘယ်လောက်စုမယ် တစ်လဘယ်လောက်စုမယ် တစ်နှစ်နေရင် ဘယ်လောက်ရရမယ်ဆိုတဲ့ ပန်းတိုင်ချမှတ်ပါ။ တကယ်လည်း ရအောင် ဇွဲရှိရှိနဲ့စုပါ။ တစ်နေ့ကို ငွေ ၁၀၀၀ စုရင်တောင် ၅ နှစ်ကြာတဲ့အခါ အရင်းချည်းပဲ ၁၈ သိန်းကျော်စုမိပါလိမ့်မယ်။
• အဓိကနဲ့ သာမညခွဲခြားပါ။
တခါတလေ လိုချင်တာတွေကို မြင်တာနဲ့လက်မတွန့်ဘဲ ဝယ်မိတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက် တကယ်လိုအပ်နေတာကဘာလဲ၊ လိုအပ်နေတာမဟုတ်ဘဲ မြင်တိုင်းလိုချင်နေတာလား၊ အိမ်မှာရှိသေးလား စသဖြင့် စဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီးမှ ဝယ်သင့်ပါတယ်။
• အလွယ်တကူ ယူမသုံးမိပါစေနဲ့။
စုထားတဲ့ ငွေတွေကို သော့ခတ်သိမ်းတာဖြစ်ဖြစ် စုဘူးထဲထည့်တာဖြစ်ဖြစ် လွယ်လွယ်ပြန်မထုတ်သုံးမိလောက်မယ့်နေရာမှာ စုပါ။
အိမ်မှာစုရင် ပြန်ထုတ်သုံးဖို့လွယ်တတ်ပါတယ်။ စုထားတာလေး များလာတဲ့အခါ ဘဏ်ထဲသွားသွားထည့်ထားရင် အတိုးပါရမှာပါ။
• စာရင်းရေးပြီး ဈေးသွားပါ။
ဈေးဝယ်တဲ့အခါ အမှတ်တကယ်ဘာလိုအပ်လဲဆိုတာ ကြိုတင်စာရင်းပြုစုပြီး လိုအပ်တာပဲဝယ်တဲ့အကျင့်လုပ်ထားမယ်ဆိုရင် အပိုပစ္စည်းတွေ ဝယ်မိတာမျိုး နည်းသွားစေပါတယ်။
ရှားရှားပါးပါး တခါတလေပဲသုံးဖြစ်မယ့် ပစ္စည်းမျိုး၊ ငှားသုံးလို့ရမယ့်ပစ္စည်းမျိုးကို အကုန်အကျခံပြီး ဝယ်မသုံးလိုက်ပါနဲ့။ အမြဲတမ်းသုံးဖို့လည်းလိုမယ်၊ ငှားသုံးလို့လည်း မလွယ်မယ့်ပစ္စည်းမျိုးတွေကိုသာ ဝယ်ပါ။
• အိမ်မှာ ချက်စားပါ။
အပြင်စာတွေအများစုဟာ ပေးရတဲ့ငွေကြေးလည်းများပြီး သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်မှုလည်း နည်းတတ်သလို ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ဖို့လည်း မလွယ်ပါဘူး။ အိမ်မှာကိုယ်တိုင် ချက်ပြုတ်စားသောက်ခြင်းက ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အပြင် စရိတ်လည်းလျော့ချနိုင်ပါတယ်။
တစ်လတစ်လ အသုံးစရိတ်မှာ ဖုန်းဘေလ် အင်တာနက်ဘေလ်တွေပေါင်းလိုက်ရင် ထင်ထားတာထက် ပိုကုန်နေတတ်ပါတယ် ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ အင်တာနက် ဒေတာသုံးစွဲမှု သတ်မှတ်ချက် ကျော်လွန်မသွားစေရန် သင်၏ဖုန်းတွင် ဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှုအပလီကေးရှင်းများကို အသုံးပြုပါ။ လိုတာထက်ပိုပြီး ဖုန်းအကြာကြီးပြောခြင်းက ငွေကုန်ကြေးကျပိုများစေတဲ့အပြင် ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း မကောင်းပါဘူး။
စာဂျပိုးအများစုကတော့ ထွက်သမျှ စာအုပ်လည်းဖတ်ချင် စာအုပ်ကောင်းတွေလည်း ဝယ်ချင်နဲ့ စရိတ်တော်တော်ထောင်းပါတယ်။ သင့်စာအုပ်ဖိုးတွေသက်သာဖို့ စာကြည့်တိုက်ကို အသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ စာကြည့်တိုက်သွားခြင်းဖြင့် ကိုယ့်ငွေကို ချွေတာတဲ့အပြင် နောက်ထပ်စာအုပ်တွေ ထပ်ဖတ်ချင်တဲ့ စိတ်အားလှုံ့ဆော်မှုများရရှိခြင်း စတဲ့ စာဖတ်ခြင်းအလေ့ကျင်းကောင်းတွေပါ ရရှိနိုင်မှာပါ။
ခုံပုလေးတွေ လုပ်တာမျိုး၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်းထုတ်ပိုးတာမျိုး စတဲ့ ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရမယ့်အရာမျိုးကို ကိုယ်တိုင်စမ်းလုပ်ကြည့်ပါ။ ဝယ်သုံးတာထက် ပိုက်ဆံချွေတာနိုင်ပြီး ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေက ပျော်စရာကောင်းစေပါတယ်။
• ဆေးလိပ်၊ ကွမ်း၊ အရက်တို့က အပိုကုန်စေတဲ့ အရာတွေပါ။
ဆေးလိပ်ဖိုး ကွမ်းဖိုး ဘီယာဖိုး အရက်ဖိုး စတာတွေဟာ တစ်ခုချင်းစီဆို မများပေမယ့် တစ်လစာပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ ထမင်းစရိတ်နီးပါးလောက်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။
• ကိုယ်စုထားတာ ဘယ်လောက်ရပြီလဲ အမြဲစောင့်ကြည့်ပါ။
ကိုယ်စုထားတာ ဘယ်လောက်ရပြီလဲဆိုတာကို စုဘူးလေးကို ကြည့်တာဖြစ်ဖြစ်၊ ဘဏ်စာအုပ်လေးကြည့်တာဖြစ်ဖြစ် ပြန်ကြည့်တဲ့အခါ ပီတိဖြစ်ရပြီး နောက်ထပ်စုဖို့အတွက် အင်အားတွေလည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုခုဝယ်တော့မယ်လို့ မဆုံးဖြတ်ခင် ကိုယ့်ရဲ့သူငယ်ချင်း မိသားစုဝင်တွေဆီမှာ အဲ့ဒီပစ္စည်းရှိပြီးသားလားဆိုတာ မေးကြည့်သင့်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ရစ်ပစ္စည်းတွေကို ပြန်သုံးတာဟာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကို လျော့ကျစေနိုင်တဲ့အတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ထိန်းသိမ်းရာရောက်ပါတယ်။ ဥပမာ- ကိုယ့်မိသားစုဝင်ထဲမှာ ကလေးအကြီးရှိရင် သူတို့ဆီက အဝတ်အစားတွေ ကစားစရာတွေကို ကိုယ့်ကလေးအတွက် လက်ဆင့်ကမ်းပေးပြီး တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးကူညီနိုင်ပါတယ်။
ကဲ ငွေထွက်ပေါက်တွေ များများပိတ်နိုင်လေ ငွေပိုစုမိလေဆိုတော့ ငွေများများသုံးနိုင်ဖို့ များများစုကြရအောင်။ ငွေလွှဲငွေထုတ်ဖို့လိုအပ်လာပြီ ဆိုရင်လည်း ငွေလွှဲနှုန်းထားအသက်သာဆုံးပေးထားတဲ့ TrueMoney နဲ့ငွေလွှဲရင်း အပိုငွေကိုစုလို့ရပါတယ်နော်။
3 Vs3Soccer Myanmar 2020
2019 Annual Staff Gathering Party